Dane-Elec Data Recovery: Olee naghachi Data si Dane-Elec Nchekwa De
> Resource> Naghachi> Dane-Elec Data Recovery: Olee naghachi Data si Dane-Elec Nchekwa Devices
Ọ Bụ kwe m omume na-agbake Data si Dane-Elec USB flash mbanye?
M na mberede formatted m 8GB Dane-Elec USB flash mbanye, nke nwere 4 afọ uru nke ozi dị ka foto na akwụkwọ. Ugbu a m niile stof na na USB na-arahụ. Ihe m nwere ike ime iji nweta m faịlụ azụ? Echere m na ha agaghị na-ruo mgbe ebighị ebi. Nwere ike onye na-agwa m otú? Daalụ nke ukwuu.
Gị chere ziri ezi. Foto na dọkụmentị ka bụ na gị na Dane-Elec USB flash mbanye. Ha na-dị nnọọ ewere dị ka keerughi data na-eche ka a overwritten site ọhụrụ data. Ihe mbụ i kwesịrị ime bụ ịkwụsị iji gị Dane-Elec USB flash mbanye ma ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie na-esi gị data azụ. Mgbe ahụ ị ga-mkpa iji nweta a Dane-Elec data mgbake ngwá ọrụ maka enyemaka.
Ebe a ga-amasị m ka nwere ike ikwu Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac n'ihi unu, a ịba uru nke na-enyere gị aka naghachi data si nile di iche iche nke Dane-Elec nchekwa ngwaọrụ, gụnyere flash kaadị ebe nchekwa, mpụga ike mbanye na USB flash mbanye. Ya dị ike na atụmatụ nwere ike inyere gị aka naghachi gị furu efu faịlụ dị ka oyiyi, videos, akwụkwọ, ọdịyo faịlụ, Archive faịlụ na ndị ọzọ.
Ị nwere ike ibudata a ikpe mbipute a ngwá ọrụ na-agbake data si Dane-Elec flash kaadị ebe nchekwa, USB flash mbanye na mpụga ike mbanye ugbu a!
Igosi Dane-Elec Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
Ugbu a, ka anyị na-agbalị naghachi data si Dane-Elec mpụga ike mbanye, flash kaadị ebe nchekwa ma ọ bụ USB flash mbanye na enyemaka nke Wondershare Data Recovery maka Windows. Ọ bụrụ na ị nwere Mac, ị nwere ike hazie mgbake na yiri nzọụkwụ na Mac version.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode na-amalite Dane-Elec data mgbake
Ozugbo-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị, ị ga-enweta ihe interface dị ka ndị na. Ebe a mkpa ka ị họrọ a mgbake mode na-amalite.
I nwere ike iri "Echefuola File Iweghachite" mode dị ka a mbụ na-agbalị naghachi data si Dane-Elec USB flash mbanye.
Cheta na: Biko mee n'aka na gị Dane-Elec nchekwa ngwaọrụ nwere ike-ọma-ejikọrọ na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị Dane-Elec USB flash mbanye
Na nke a dị mfe nzọụkwụ, ị dị nnọọ mkpa họrọ gị Dane-Elec USB flash mbanye na pịa "Malite" ke window na-amalite ịgụ isiokwu faịlụ na ya.
Naghachi data si a formatted Dane-Elec ngwaọrụ, ị nwekwara ike họrọ "Kwado Deep iṅomi" atụmatụ ke window.
Nzọụkwụ 3 Naghachi data si Dane-Elec USB flash mbanye
Ugbu a niile hụrụ faịlụ a ga-emere na window mgbe scanning. Na ị dị nnọọ mkpa akara faịlụ gị mkpa iji weghachite na pịa "Naghachi" iji naputa ha gị na kọmputa.
Cheta na: Iji zere data overwritten, biko adịghị ịzọpụta natara data azụ gị Dane-Elec nchekwa na ngwaọrụ.